Laamaha dhismaha oo raadinaya shaqaale badan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Laamaha dhismaha oo raadinaya shaqaale badan
La daabacay måndag 14 mars 2016 kl 10.36
Sweden waa in la dhisaa guryo badan, iskuulo, jidad iyo dhabooyin tareen.
Laakiin su’aal ayaa ah halkee looga keenayaa shaqalee dhimayaashan ka howl-geli lahaa. Laamaha dhismaha ayaa u baahan shaqaaleynta ugu yaraan 40 000 oo ah shaqaale cusub oo ka howl-gala laamaha dhismaha.
– Waxay iigu muuqataa in ay tahay dhib helida shaqaalehan. Waxaan qabaa in ay tahay mid aan macquul aheyn helida shaqaale tiradas dhan, nasiib xumo, sidas waxaa yeri Jan Henriksson oo madax u ah shirkadda dhismaha Q-gruppen.
Maxaa muujinaya in ay dhib tahay helida shaqaale cusub oo dhisme?
– Waxaa lagu dareemayaa mar kasta shaqaale raadin baan ku jirnaa. Maantana wey nagu yaryahiin shaqaalahu si aan u dhisno tirada guryo ee rabi laheyn in aan dhisno.
Waakalada Guryeynta Boverket ayaa dejisey gool ah in la dhiso guryo cusub oo gaaraya 700 000 illaa iyo sannadka 2025. Waxaa intaas sii dheer in la dhiso iskuulo cusub, xarumo caafimaad, jidad, dhabayaal tareen iyo waxyaale kale oo badan.
Hey’adda dowladda u qaabilsan saadaasha dhaqaalaha Konjunkturinstitutet ayana warbaxin ay billowga sannadka soo saartay wax ku sheegtey in saddexdii shirkad ee dhisme ay labo sheegayaan gabaabsi ka heysta dhanka shaqaalaha taas oo saameyn ku yeelata tirada guryo ee ay dhisi lahaayeen.
Dowladda ayaa horey biloowdey qorshe loogu wacay ”dhabaha dheereeya” oo looga dan leeyahay in suuqa shaqada dhaqso lagu soo geliyo dadyowga waddanka ku cusub. Jan Henriksson iyo shrikaddiisa Q-gruppen waxay ka qayb qaataan qorshahan ”dhabaha dheereeya” dhawaan na waxuu la kulmey Seyoum Semma oo ah farsamo yaqaan dhanka dhismaha heystana afar sanno waxbarasho ah waqti dheerna ka soo shaqeeyey dhanka dhismaha waddanka Itoobiya. Seyoum Semma waxaa ku rajo weyn yahay in dhawaan shaqo billaabo kadib markii uu la kulmey shirkadaha dhismaha ee wax shaqaaleeya
Shaqo baxiyaasha iyo iskaashada laamaha dhismaha ayaa ku heshiiyey in ay ka wado qayb qaataan qorshaha ”dhabaha dheereeya”
Ola Månsson, maareeyaha ururka ay ku mideysan yahiin shirkadaha dhismaha ayaa u arka in ay tahay lago maarmaan in shaqaale cusub loo helo shirkadaha dhismaha.
– Haddii ay tahay in aan dhisno 700 000 oo guryo, markas waxaan u baahanahay 40 000 oo ah shaqaale cusub, ayuu yeri.
Maxaa dhacaya haddii aad ku guul dareysatiin helida 40 000 oo ah shaqaale cusub oo dhisme?
– Markas macquul ma noqoneyso in aan dhisno guryahan.